Visas mankany Thailand ~ Journey-Assist - Karazan'ireo visa ho any Thailand.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Famangiana any Thailandy
Visas, Customs et Law any Thailand
Visa mankany Thailand
Ny visa iray fizahan-tany mankany Thailand dia navoaka any amin'ny seranam-piaramanidina any amin'ny faritanin'ity firenena ity taorian'ny nahatongavan'izy ireo, na tany amin'ny masoivoho Thai tany amin'ny firenena mpizahatany. Misy ny fizakan-dalàna visa ho an'ny Rosiana; afaka mijanona tsy misy visa ao Thailand izy ireo mandritra ny 30 andro. Mandritra izany fotoana izany, hajia mifanaraka amin'ny paska ao anaty seranam-piaramanidina rehefa tonga. Saingy mila pasipaoro iray manan-kery mandritra ny 6 volana ianao manomboka amin'ny fotoana hidiranao ao Thailand. Mba hiampitana ny sisin-tany dia mila fiantohana koa ianao.
Tsy manana fotoana tahaka izany ny olom-pirenena belarosiana, tsy misy eto ny masoivoho Thailandy ary tsy misy ny fizotran'ny visa ho an'ny olom-pirenena belarosiana. Ny olom-pirenena belarosiana dia afaka mahazo visa any Kiev na any Moskoa.
Azo atao amin'ny fahazoan-dàlana ho an'ny olom-pirenena Okrainiana raha tsy tonga hatramin'ny 15 andro. Ho an'ny olompirenena ao amin'ny Federasiona Rosiana, Ukraine ary Belarus dia azo atao ny hahazoana visa mpizahantany tokana sy maromaro.
Visa 15 andro mankany Thailand
Natao ho an'ny olom-pirenena Okrainiana izay mikasa ny handany 15 andro any Thailand.
Ny fahazoana an'io visa io dia mety any amin'ny seranam-piara-manidina any Thailand, izay misy mpanohitra manokana momba izany. Ireto antontan-taratasy manaraka ireto dia takiana:
Ny pasipaoro manan-kery hatramin'ny 6 volana amin'ny fotoana fidirana. Tsy maintsy misy pejy madio farafaharatsiny iray hahazoana visa.
Sarinà sary 2 ka hatramin'ny 4 cm, izay nalaina taloha raha 6 volana talohan'ny fangatahana visa.
Karatra fifindra-monina - navoaka teo amin'ny fiaramanidina.
Sarinà tapakila fiaramanidina mankany Thailand.
Boky fangatahana Visa - navoakan'ny serivisy fifindra-monina any Thailand mivantana eny amin'ny lampihazo.
Ny fahazoan-dàlana amin'ny visa toy izany dia azo itarina mandritra ny 7 andro. Izany dia azo atao ao amin'ny birao fifindra-monina any Thailand. Ny vidin'ny fandidiana toy izany dia 1900 baht.
Visa visa ho an'ny mpizahatany any Thailand
Ny fahazoan-dàlana toy izany dia azo alaina hatramin'ny 90 andro miaraka amin'ny zo hijanona ao Thailandy mandritra ny 60 andro. Amin'ity tranga ity dia mila mandoa saram-pianakaviana vidiana 40 dolara dolara ianao.
Ny fahazoan-dàlana toy izany dia ahafahanao tonga any Thailand indray mandeha, ary raha misaraka amin'ity firenena ity ianao, dia mila miantso any amin'ny biraon'ny fifindra-monina Thailand raha mahazo fahazoan-dalana manokana hamangiana fitsidihana alohan'ny handaozanao manao dia.
Ny visa iray ho an'ny mpizahatany dia atolotra miaraka amin'ireto antontan-taratasy manaraka ireto:
Pasipaoro vahiny (manan-kery enim-bolana farafahakeliny hatramin'ny daty nahatongavany tany Thailand).
Ny haben'ny sary 3,5 hatramin'ny 4,5 (tsy maintsy alefa aloha ny fanontanianao).
Sarin'ilay pejy voalohany pasipaoro.
Sarin'ireo tapakila roa (fitsangatsanganana).
Fanambarana kaonty momba ny banky navoakan'ny banky (650 $ isaky ny olona iray farafahakeliny) na fotokopia fanaraha-maso tsy maintsy mivoaka amin'ny vola mitovy. Raha toa ka mivoaka ny taratasy fahazoan-dàlana ho an'ny mpivady dia mila manampy ny kopia fanamarinana ny fanambadiana ianao. Raha mpizahatany roa miaraka amin'ny filazalazana mitovy amin'ny tsy misy ifandraisany mifanakaiky, dia takiana taratasy fanohanana (izay tsy maintsy hanamarina vatan-kevitra iray).
Taratasy avy amin'ny asa na avy amin'ny andrim-pampianarana (ho an'ny olona miasa / mianatra). Avy amin'ny mpizahantany izay tsy miasa ary tsy mianatra, tsy takiana io taratasy io. Ilay mpizahatany, izay mpandraharaha tsirairay dia tokony hanolotra fanamarinam-panjakana. fisoratana anarana.
Visa visa mpizahatany maromaro mankany Thailand
6 volana ny fahazoan-dàlana amin'ny visa toy ny 60 volana, fa ny fijanonana mitohy dia tsy mihoatra ny 200 andro manomboka ny fahatongavany. Tsy maintsy mandoa saram-bola ivoahana amin'ny vola XNUMX dolara ianao.
Visa maro ho an'ny mpizahatany dia atolotra eo anatrehan'ireto antontan-taratasy manaraka ireto:
Pasipaoro avy any ivelany (manan-kery mandritra ny 6 volana farafahakeliny aorian'ny nahatongavany tany Thailand).
1 sary (mila apetaho amin'ny fanontanina io aloha).
Sarin'ilay pejy voalohany pasipaoro iray.
Sarin'ireo antontan-taratasy manaporofo ny famandrihana hotely na trano fonenana hafa.
Taratasy fanamarinana momba ny asa na andrim-pampianarana (ho an'ny mpiasa / mpianatra).
Ny taratasy fanamarinana navoakan'ny banky dia manamarina ny fisian'ny Euros 6 farafaharatsiny ao amin'ny kaonty miaraka amin'ny hetsika isam-bolana eo amin'ny takelaka mifandanja amin'ny vola (000 euros).
Mandritra izany fotoana izany dia tsy ilaina ny fiantohana amin'ny dia.
Azo atao koa ny fahazoana visa tsy misy mpifindra monina mankany Thailand amin'ny karazana maro samihafa.
Visa tsy misy mpifindra monina
Mihoatra mandritra ny 3 volana. Navoakan'ny consulat io fanjakana io amin'ny olona izay mikasa ny dia miaraka amin'ny tanjona tsy mifandraika amin'ny fizahan-tany - asa, raharaham-barotra, fianarana ary ny sasany hafa.
Fahazoana visa tsy misy mpifindra monina
Mihoatra mandritra ny 1 taona. Navoakan'ny kaonsily Thailandey amin'ny antony mitovy amin'ireo ho an'ny visa tsy misy mpihetsiketsika nefa ny vidiny no lafo kokoa.
Iray amin'ireo safidy ho an'ny visa tsy misy mpifindra monina mankany Thailand ny visa (mpianatra). Ny fahatongavanao teny vahiny any amin'ny sekoly iray amin'ny fiteny eo an-toerana, rehefa tonga eto amin'ity firenena ity ianao na mandritra ny fotoana maharitra kokoa. Ny sasany koa tonga mba hianatra mozika martey Muay Thai, fahandroana ary teknolojia informatika. Ho an'ny vahiny dia hita ao amin'ny oniversite Thailand ihany koa ny fampianarana.
Azo atao koa ny fahazoan-dàlana fisotroan-dronono, izay manome zo hipetraka eto amin'ity firenena ity, fa ny asa rehetra an'ny asa dia voarara. Raha sendra hitan'ny manampahefana ao amin'ny governemanta fa miasa amin'ny fisotroan-dronono toa izany mandritra ny fijanonany ao Thailandy, dia hofoanana ny fahazoan-dàlana pension. Mba hahazoana visa toy izany dia tsy maintsy manana farafaharatsiny farafahakeliny ianao ary manana vola ampy hipetrahana (farafahakeliny 50 800 baht amin'ny kaonty na vola kely isam-bolana misy 65 baht, na fitambaran'ny vola ao amin'ny kaonty sy vola miditra hatramin'ny 800 baht farafaharatsiny isan-taona).